Ndi Uwe Ojii Azọpụta Nwoke Ndi Ntọọ Ji N’osun Steeti | odumblog
Ndi uwe ojii nọ n’Osun Steeti kwuru na ha azọputala otu nwoke aha ya bụ Bewaji Oladipo na Satodee. Oladipo bụ onye atọọrọ n’okporoigwe na Legọọsi.
Onye na-ekwuchitere ndi uweojii Osun ọnụ bụ SP Folashade Odoro kwuru na ha zọpụtara nwoke a na Fraidee, mgbe ọ fọdụrụ nkeji iri na ise ka ọ kụọ elekere asaa nke abali. Ọ bụ ndi ‘Puff Adder Operatives’ zọpụtara ya mgbe ha na-eme nkwusi na nyocha ụgbọala n’ụzọ awarawa Oshogbo-Ilorin.
Odoro kwuru na-atọrọ nwoke a ebe ọ gara iwere ego n’igwe eji ewere ego nke ndi bekee kpọrọ ‘Automated Teller Machine’, nke di n’akụkụ ebe obibi bụ na Iyana-Ipaja, Legọọsi. Ndi tọọrọ nwoke a bụ ụmụ okorobia ano; mmadu abụọ n’ime ha yi uwe ndi amị.
Ndi uwe ojii a sịrị na ndi ntọ a gbara ọsọ mgbe a kwụsịrị ha. Ha hapụrụ ụgbọala ha na onye ha ji ebe ahụ. Ndi uwe ojii kwuru na ha na-anwa ike ha ịhụ na-ejidere ndi ọjọọ a. Ha mere ka a mata na nwoke ahụ azọpụtara agakwurula ndi be ya.